(SAWIRRO) Shirkada Nabaad Mall oo xarun cusub ka furatay magaalada Garowe. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Shirkada Nabaad Mall oo xarun cusub ka furatay magaalada Garowe.
Garowe (Puntlandi) Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda Puntland, Cabdiweli Xirsi Cabdulle, ayaa xalay xariga ka jaray dhisme cusub oo shirkada Nabaad Mall ay ka dhisatay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland.
Dhismahaan cusub oo ka kooban Hotel, Maqaayad iyo Supermarket, ayaa shirkada Nabaad Mall waxaa ay sheegtay inay tahay xaruntii ugu weynayd ee ay ka dhisato caasimadda Puntland, taasoo badeshay xaruntii hore oo ka koobnayd super market oo kaliya.
Xafladii xariga looga jarayay waxaa kaso qeyb galay masuuliyiin kala duwan, ganacsato iyo qeybaha kala duwan, iyadoo halkaas loogu sameeyay casho sharaf lagu daahfurayay xaruntaan cusub.
Maamulaha guud ee shirkada Nabaad Mall, Iimaan Nuur Guure, ayaa sheegay ujeedada ay u maalgaliyeen xaruntaan inay tahay sidii ay uga jawaabi lahaayeen baahida dadweynaha iyo in lasii horumariyo addeegyada shirkada Nabaad.
Maamuluhu wuxuu sheegay shirkada Nabaad Mall oo la aas aasay sannadkii 2009 islamarkaana xarumo kala duwan gobolada Soomaaliya, inay tahay shirkadii ugu horeysay ee Mall ka furata Garowe, islamarkaana dareenta in dadweynaha Garowe u baahan yihiin addeeg nuucan ah.
Ku xigeenka duqa degmada Garowe, Cismaan Towxiid, ayaa soo dhoweeyay xaruntaan cusub, isagoo sheegay inay qeyb ka noqonayso horumarka caasimadda Puntland, wuxuuna u mahad celiyay ganacsatada maalgashaday oo fahmay muhiimada ay leedahay in dalka la maalgashado.
Guddoomiyaha dallada PUNSAA, Faysal Axmed Warsame (Qaran) oo ku hadlayay magaca ururada bulshada, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in xaruntaan cusub ee shirkada Nabaad Mall ay abuurtay fursado shaqo oo ay ka faa’idaysandoonan dhalinyaro badan oo shaqo la’aan ahaa, wuxuuna dowladda Puntland ugu baaqay inay abaal mariso shirkadaha shaqo abuurka soo kordhiya, iyadoo loo eegayo tirada shirkad walba ay shaqaaleysiisay.
Xildhibaan Cismaan Batrol oo katirsan barlamaanka dowladda Puntland, ayaa ku ammaanay aas aasayaasha shirkada Nabaad oo ah dhalinyaro reer Puntland oo isku geeyay aqoontooda iyo awoodooda dhaqaale inay muujiyeen faa’idada ka dhalankarta maalgashiga dalka. Waxaa uu xildhibaanku sheegay inay jiraan dad badan oo dhaqaale badan jeebka ku haysta, laakiin aan doonayn in dalkooda maalgashadaan.
Wasiirka ganacsiga Puntland, Cabdiweli Xirsi Cabdulle (Indhoguran), ayaa sheegay dowladda Puntland inay farxad u tahay in ganacsigu meel fiican marayo ayna ganacsato ku tartamayaan ganacssiga nuucayadiisa kala duwan.
Wasiirku wuxuu qiray in shirkada Nabaad kamid tahay shirkadaha horumarka wanaagsan ka gaaray ganacsiga iyo shaqo abuurka, wuxuuna tilmaamay wasaaradda ganacsigu inay eegayso in abaal marin lagusiiyo sida ay dhulkooda u maalgashadeen iyo heerka shaqo abuur ay ku tilaabsadeen.
Wasiir Indho guran waxaa uu ku booriyay shirkadaha ganacsigu inay keenaan fikrado cusub oo ah inay soo iibsadaan warshado yar yar soo saara badeecadaha dibada lagasoo dhoofsanayo oo qiimaha badan uu ku baxayo.